အိုင်ဖုန်း ၊ android ဖုန်း အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > အိုင်ဖုန်း ၊ android ဖုန်း အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း
အိုင်ဖုန်း ၊ android ဖုန်း အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 7:48 AM နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
အန်းဒရွိုက်စမတ် ဖုန်း နဲ့ အိုင်ဖုန်းတွေကိုတစ်ပတ်ရစ်ပြန် ဝယ်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊တခြားသူဆီ ကနေဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့အခါဖြစ် စေဝယ်ယူတဲ့အခါ ဖြစ်စေ ဖုန်းအ သစ်မှာယူတာဖြစ်စေ တရားဝင် အ လုံး ဟုတ် မဟုတ် အတုအစစ်ကို သေချာစိစစ် ခွဲခြားစစ်ဆေးပြီးမှ ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
ဖုန်းအတွင်း အပြင်ဖီးချားတွေ ကို တရားဝင် အ လုံးဟုတ်မဟုတ် စိစစ် စစ်ဆေးပါ။ တရားမဝင်တဲ့ အ လုံးမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ အခါမှာ မသမာ သူ တစ်ယောက်သုံးခဲ့တဲ့ဖုန်းသာ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရဲ တွေ စစ်ဆေး တဲ့ အပိုင်းတွေမျိုး ရှိခဲ့ရင် မိမိအနေ နဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာ ကြောင့် သေ ချာစစ်ဆေးပြီး ဝယ်ယူ သင့် ပါ တယ်။
နောက်ပြီး တရုတ်ပြည်ဘက် ကဝင်တဲ့ အလုံးတွေမှာလည်း တ ရားမဝင် အလုံးတွေ ရောပါလာ တက် သလိုအောက်လုံးလို့ ခေါ်တဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ လျှို့ဝှက်ရော သယ်လာတဲ့အလုံးတွေကလည်း ဖုန်းအတုတွေပါလာတတ်ပါတယ်။ ဖုန်းဆိုင်ကြီးမှာဝယ်ယူတယ်ဆိုရင်တောင် ဖုန်းအတွင်းအပြင်ဖီးချားကို အောက်ပါအတိုင်း စိစစ် စစ် ဆေး ပြီးမှသာဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
အန်းဒရွိုက် ဖုန်းတွေကို စစ် ဆေးဖို့ ပထမ အ ချက်အနေနဲ့ ဖုန်း ကိုယ်ထည် ဖွဲ့ စည်းထားပုံကို စစ် ဆေး ပါ။ မူရင်း ဖုန်း နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့် ပါ။ နာမည် ကြီးဈေးကြီးတဲ့ စမတ်ဖုန်းတော် တော်များများက တော့ အရည်အ သွေးမြင့်တဲ့ပစ္စည်း တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာ ပါ။ ဒုတိယ အ ချက်အနေနဲ့ စမတ် ဖုန်း ထုတ်ကုန် တွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ထဲဝင်ပြီး စစ် ဆေးပါ။
ထပ်ပြီး သေချာဖို့ အတွက် ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့်ထုတ်ကုန်ရဲ့ နာ မည်ကို အဲသည်ကုမဏီတံဆိပ်ရဲ့ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲဝင်ပြီး စစ်ဆေးပါ။
ဥပမာ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့်ဖုန်း အမျိုး အစားက ဆမ်ဆောင်းဖုန်း ဆိုရင် ဆမ်ဆောင်းဖုန်းအများစုရဲ့ ဖုန်းစခရင်က ဖန်နဲ့ ပြုလုပ်ထား တာကိုအခြေခံတာကြောင့် ကိုယ် ဝယ် ယူမယ့် ဖုန်းစခရင်က ပလတ် စတစ်ဖြစ်နေရင်တော့ ကလုန်း ဖြစ် ဖို့ သေချာနေပါပြီ။
တတိယအချက်အနေနဲ့ဖုန်း အတွင်းပိုင်းကဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ တခြား ပြင်ပအသေးစိတ် ဖော်ပြချက်တွေကိုစစ်ဆေးပါ။ ဖုန်းကို ပါကင်ပိတ် ထားတဲ့ဘူးခွံကို စစ်ဆေးပါ။ထုတ် ကုန်ရဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တွေကိုပါကင်ပိတ်ထားတဲ့ဘူးခွံရ ကျောဘက်မှာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲသည်အချက်တွေနဲ့ဖုန်း အ တွင်းပိုင်းထဲကဖော်ပြချက် တွေ ကိုနှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။ ဖုန်းတွင်း settings > about phone ထဲဝင် ကြည့် ပြီး နှိုင်း ယှဉ်ပါ။ တကယ်လို့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ကမတူညီဘဲ ကွဲပြားနေရင်တော့ ကလုန်းဖြစ်ဖို့ သေချာနေပါပြီ။
ဝယ်ယူမယ့်ဖုန်းကပါကင်ဘူးခွံမပါဘူးဆိုရင်တော့အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ kenGSM Arena ဝက်ဘ် ဆိုက်ထဲ ဝင်စစ်ဆေးပြီး တိုက်ကြည့်ပါ။ အဲ သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်က မိုဘိုင်းလ် ဖုန်း တော် တော်များများရဲ့အသေး စိတ် ဖော်ပြချက်တွေကို တင်ပြ ထား တဲ့ ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဖုန်းမဆိုအန်းဒရွိုက်ဖြစ် စေအိုင်အိုအက်စ်ဖြစ်စေ အိုင်အမ် အီးအိုင်(IMEI) လို့ခေါ်တဲ့ တရား ဝင်နံပါတ် ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ်လ် အစစ် ဖြစ်မှ သာ နံပါတ်က တရားဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်အိုင်အမ်အီးအိုင်ကုတ်နံပါတ်ကို စစ်ဆေးရ မှာ ပါ။အန်းဒရွိုက်ဖုန်းတွေ အတွက်ကတော့ စမတ်ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာ ကုတ်နံပါတ်ကို ဖော်ပြပေးထား တက်ပါတယ်။
ကျောဘက်မှာမတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်း Settings > About > Status ထဲမှာအိုင်အမ်အီးအိုင် IMEI ရဲ့ အချက်အလက် တွေကို တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် တစ်မျိုးအနေနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အိုင် ကွန်းထဲမှာ *#06# နှိပ်လိုက်ရင် ဖုန်းရဲ့ အိုင်အမ်အီးအိုင်ကုတ် ကို တွေ့ မြင်နိုင်မှာပါ။ အိုင်အမ်အီးအိုင် မှာ တခြားဖုန်းအမျိုးအစား ဖော်ပြထားပြီး ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့မတူရင်တော့ ကလုန်းဖြစ်နေတဲ့ ဖုန်းအတုဆိုတာ အသေချာပါပဲ။
စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့ဖုန်းရဲ့ third-party app ကို စစ်ဆေးပါ။ စစ်ဆေးဖို့အတွက်အန်းဒရွိုက်ဖုန်း ဆိုရင် ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးကနေ Antutu Benchmark ကို ဒေါင်း လုတ်ဆွဲပါ။သူ့ရဲ့ logo ပုံစံကတော့ အန်းဒရွိုက် ရုပ်ပုံနဲ့ နောက်ခံမီး တောက်နေတဲ့အက်ပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်အက်ပ်က ကိုယ်ဝယ်ယူ မယ့်ဖုန်းရဲ့ speed အမြန်နှုန်းနဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တ ကယ်လို့ တခြားထုတ်ကုန်ဖုန်းရဲ့ နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြနေရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက ကလုန်းဖြစ်နေပါပြီ။ ဝယ်ယူမယ့်ဖုန်းကအိုင်ဖုန်းဆိုရင် အမှတ်စဉ်နံပါတ်တွေကို စစ်ဆေး ပါ။ နံပါတ်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့ အက် ပဲလ်ရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲ ဝင်ကြည့်ပါ။နံပါတ်ကိုသိချင်ရင် အဲ့ သည်ဖုန်းရဲ့ Settings ထဲ က Ge-neral >About phone ထဲဝင် ပါ။ ရှာမတွေ့ရင် https:// selfsolve. apple. com/agreement Warr-antyDynamic.do ထဲဝင်ကြည့် နိုင်ပါ တယ်။ အဲသည်မှာဖုန်းရဲ့ အာ မခံ အကြောင်းအရာတွေပါ တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဆေးတဲ့အခါ “We, re sorry, but this serial number is not valid. Please check your information and try again” လို့ မက်ဆေ့ခ်ျစာသား ဖော် ပြ နေရင်တော့ ကိုယ့်ဝယ်ယူမယ့် ဖုန်းက ကလုန်းဖြစ်နေတဲ့ဖုန်း အ တု ပါပဲ။
အိုင်ဖုန်းကတော့တရားဝင် ဆိုင်ကြီးတွေမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့သိပ်မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိုင်ဖုန်းအလုံးတွေက ပါကင်ပိတ် ဖြစ်တာကြောင့် ဝယ်ယူပြီးရင် လည်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကို စစ်ဆေးပါ။ ကလုန်း ဆိုရင်အိုင် အိုအက်စ်စနစ်ကို အသုံး မပြုထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ကျွန်း (iTunes)ကနေ ချိတ်ဆက်ပြီင်္ံး i Cloudအကောင့်ကိုအသုံးပြုကာကလုန်းဟုတ်မဟုတ် စခရိုနိုက်စ်လုပ်ပြီး စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမဝင်အလုံးဆိုရင် အ ပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်းကတစ်ထေရာဖြစ် နေတက်ပေမဲ့ အထဲက လုပ်ဆောင် ချက်ပိုင်းတွေ ကွာခြားပါလိမ့်မယ်။ လက်ဗွေရာမှာဆိုရင်လည်းလက်မနဲ့ fingerprint လုပ်ထားတယ် ဆိုရင်အတုကလက်ချောင်းအစုံနဲ့ ဖွင့်လိုရပေမယ့် အစစ်ဆိုရင် တော့ လက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ပဲ ပွင့်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။အိုင်စီ၊ချိပ်စ်၊ကင်မရာ၊အ လေးချိန်ကိုယ်ထည် ကွာခြားတာ ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အိုင်ဖုန်း ၊ android ဖုန်း အတုအစစ် ခွဲခြားနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:48 AM Rating:5အန်းဒရွိုက်စမတ် ဖုန်း နဲ့ အိုင်ဖုန်းတွေကိုတစ်ပတ်ရစ်ပြန် ဝယ်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊တခြားသူဆီ ကနေဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့အခါဖြစ် စေဝယ်ယူတဲ့အခါ ဖြစ်စေ ဖုန...